Wakiilka Zinedine Zidane Ee Alain Migliaccio Oo Sheegay In Macalinka Reer Frence Uu San Badal Unoqon Karin Jose Mourinho( Waase Maxay Sababta?) - GOOL24.NET
Wakiilka Zinedine Zidane Ee Alain Migliaccio Oo Sheegay In Macalinka Reer Frence Uu San Badal Unoqon Karin Jose Mourinho( Waase Maxay Sababta?)
Kursiga Macalinimo ee Manchester united ayaa Wali u muuqda mid aan salfadhin waxaana inta badan la isla dhexmarayay baryahan in macalinkii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane uu badal unoqon doono Maclinka cadaadiska badan uu saaranyahy ee Jose Mourinho .
Wakiilka Zinedine Zidane ayaa si cad u beeniyay wararka sheegaya in macallina uu wakiilka u yahay uu bedeli doono Jose Mourinho si uu u noqdo tababaraha Naadiga ku ciyaaara garoonka qaadka weyn ee Old Trafford waana Manchester United.
Zidane ayaa loo arkaa badalka saxda ah ee Mourinho kadib markii Koooxda ugu guulaha badan Cariga Eglan ee Manchester United ay ku bilaabatay qaab aan wanaagsaneyn xilli ciyaareedkan 2018-19 .
Zinedine Zidane ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu bedelo Mourinho, waxaana sheekada xiligan Biyo qabow ku shubay Migliaccio oo ah wakiilka Zinedine Zidane tiyoo ay jirto Alain Migliaccio cod sare ku sheegay in shaqada United uusan qabaneynin tababarihii hore ee Real Madrid.
Wakiilka Zidane ee Migliaccio ayaa u sheegay Journal du Dimanche. ” Isaga waxa uu go’aansaday inuu qaato sanad nasiino ah dibna uusan ugu salaaban isla Sanadkaaas , Waan la hadlay isaga ,uma maleynayo inuu u socdo England, qaab ciyaareedkiisa ma ahan Mid halakaas yaala .
Si Kataba ha ahaatee United ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay Newcastle kadib markii ay 3-2 ku dubteeen kulankii dhacay sabtidii kaaas oo qeyb ka ahaa Ciyaaraha English Premier League.